သင့်အားကျောင်းဝင်းမှပြန်ပေးဆွဲရန်လိင်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကျမ်းစာအဖွဲ့မရှိပါ။ ၎င်းသည်ကိုရီးယားဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သည် - သတင်း
The ကောလာဟလများ သင်၏ကျောင်းဝင်းတွင်လှုပ်ရှားနေသည့်“ လူကုန်ကူးခြင်းခံရသည့်သမ္မာကျမ်းစာအဖွဲ့” အကြောင်းကြားဖူးသည်မှာမှား၏။
မှားယွင်းသော PSAs ဖြစ်ကြသည် ဖြန့်ဝေ ဘာသာရေးအုပ်စုနှင့် ပါတ်သက်၍ အတုအယောင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် 'ဘုရားသခင်မိခင်' ဟုခေါ်သည်။
အစီရင်ခံစာအားလုံးတွင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ အုပ်စုတစ်ခုကသင့်ကိုဖိတ်ရန်ကြိုးစားသည် သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာပါ၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကလူကုန်ကူးမှုအတွက်ခင်ဗျားကိုတကယ်ပြန်ပေးချင်ကြတယ်။ အတူတူ ကောလာဟလ အမေရိကရှိကောလိပ်ကျောင်းများမှတဆင့်၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပုံမှန် ပို့စ် မနေ့ကကျောင်းဝင်းထဲကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကသူမကိုဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏ယုံကြည်ချက်များအကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်သူမကိုသူမနှင့် 'ချိတ်ဆွဲရန်' ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုဆန့်ကျင်သူများဖြစ်သည်။ '
AD AD ဤလောကသည်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ‼ ️
ကျွန်ုပ်သည် Fashion Show ကုန်တိုက်ရှိအမျိုးသမီးနှစ် ဦး နှင့်ဘုရားသခင်အကြောင်းအမေကိုမေးမြန်းရန်ချဉ်းကပ်လာသည်။ ကျမ်းစာလေ့လာလိုလျှင်ကံကောင်းချင်တော့သူတို့ကရန်လိုမရှိကြပါဘူး။ လုံခြုံနေလား။ pic.twitter.com/d1j9qPGbzm
- Alyssa? (@alyssaaokk) ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2018
ယခုခေတ် KENT နယ်မြေတွင်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအုပ်စုတစ်ခုရှိသေးသည်။ သူတို့သည်သမ္မာကျမ်းစာအတန်းသို့တက်ရန်ကြိုးစားကြသည်၊ သို့သော်သူတို့သည်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်နိုးကြားရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ တစ် ဦး ဘဝကိုကယ်တင်ရန် RETWEET ။
- အက်ရှလေဝဲလ် (@AshleyWells_) ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2018
ကျေးဇူးပြုပြီးသတိထားပြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းနှင့်အုပ်စုလိုက်လမ်းလျှောက်ပါ။ လိင်ဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါထောင်ချောက်ထဲသွေးဆောင်ဖို့သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာမှုအတုအကြောင်းကိုလူတွေကိုချဉ်းကပ်တဲ့မကောင်းတဲ့မိန်းမတွေရဲ့ကောလာဟလတွေရှိတယ်။ ချဉ်းကပ်လာပါကဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုရှာပြီး Kent Police ကိုအရေးပေါ်မဟုတ်တဲ့လိုင်းခေါ်ပါ။ 3306737732
- Dan Oswald (@ DanOswald_21) ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2018
TECH ကျောင်းသားများ !!!
ကျောင်းဝင်းပတ် ၀ န်းကျင်၌အိပ်ယာဝင်ရန်ကြိုးစားနေသောလူနှစ်ယောက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်လိင်လူကုန်ကူးမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ သူတို့ကကျွန်မတို့ရဲ့အိပ်ဆောင်ကိုနေ့လယ်လောက်မှာလာဖွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ကံကောင်းတာကသော့ခတ်ထားလို့ပဲ။ လုံခြုံပါစေ !!!
- အဲလက်စ် (@_Alexandra_Lee) ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2018
အမျိုးသမီးများ!! ကျောင်းဝင်းရှိမိန်းကလေးများအကြောင်းသမ္မာကျမ်းစာလေ့လာရန်ချဉ်းကပ်လာခြင်းနှင့်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်လိင်လူကုန်ကူးမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်စကားပြောသောသူကိုသတိထားပါ။ ဝမ်းနည်းစရာပင်တစ်ယောက်တည်းလမ်းလျှောက်။ သူစိမ်းများနှင့်စကားပြောရန်သတိထားပါ
- Lauren (@lulu_onthatbeat) ဇန်နဝါရီလ 30, 2018
@OleMissPolice ကျောင်းဝင်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကောလာဟလများမှာ“ ဘုရားသခင်မိခင်” အကြောင်း ပြော၍ ကျောင်းသားများအားကျမ်းစာသင်အံမှုတက်ရောက်ရန်ပြောရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကုန်ကူးမှုလက်စွပ်တစ်ခုရှိသည်။ မင်းဒီအကြောင်းကြားဖူးလား။ !?
- ဟန္နဂရေ့စ် Newbold (@newbold_grace) ဇန်နဝါရီလ 30, 2018
ငါ၏အ GSU မင်းသမီးအားလုံးလုံခြုံနေဖို့ !! ကျောင်းဝင်းရှိမိန်းကလေးများသည်ညအချိန်တွင်သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းနှင့်သူတို့၏အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုပြောခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လိင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် (KSU တွင်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်) #gsu #georgiastateuniversity
- tiff (@PrincxssT) ဇန်နဝါရီလ 31, 2018
၎င်းသည်မှန်ကန်ခဲ့ပါကကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ကောလိပ်မှကောလိပ်သို့သွားသောဆိုးညစ်သည့်လိင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုအဖွဲ့မရှိပါ။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင့် World Mission Society Church ဘုရားကျောင်းဟုခေါ်သည့်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကမူလကကိုရီးယားဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တစ်လွှားမှာဌာနခွဲတွေရှိတယ်။
ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသောကျောင်းသားများမှ PSA များသည်မည်မျှတူညီသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဤလိမ်လည်မှုကြုံတွေ့ခြင်းများသည်လိင်မှောင်ခိုကုန်ကူးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုအတည်ပြုရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။
ရဲတပ်ဖွဲ့ ဤကောလာဟလသည်လူကုန်ကူးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းယုံကြည်နိုင်လောက်သောခြိမ်းခြောက်မှုမရှိချေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတိုင်ကြားချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမည်သည့်ရာဇ ၀ တ်မှုမျိုးတွင်မဆိုဤအဖွဲ့သည်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟူသောအထောက်အထားမရှိကြောင်း Lexington မှရဲများကပြောကြားခဲ့သည်။
ချာ့ချ်သည်တရားမဝင်လိင်ကုန်သွယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ကြောင်းငြင်းဆိုရန်ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များအားလိင် / လူကုန်ကူးမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်ဟုစွပ်စွဲသည့်လူမှုမီဒီယာတစ်ခုသတိထားမိလာသည်။ အဘယ်အရာကိုမျှအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်ယာန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပြုလုပ်နိုင်သည့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမဆိုရှုတ်ချသည်။ '
သူတို့သည်သင်၏ပုံမှန်ထက် ပို၍ ဆိုးညစ်ယုတ်မာလှသည် ကျောင်းဝင်းတရားဟောဆရာ weirdos မင်းကိုဂရုစိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်သင့်အားငရဲသို့ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
- ဗုံးကြဲချာ့ချ်၏“ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အစုလိုက်အပြုံလိုက်သေကြေပျက်စီးခြင်း”
Trisha Paytas နှင့် Moses Hacmon တို့၏စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု - သူတို့ဆက်နွယ်မှု၏အချိန်ကာလတစ်ခုလုံး
လိင်ပညာရေးရာသီ ၂ မတိုင်မီသင်ပြန်လည်သိမ်းယူရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးမှာဤတွင်ဖြစ်သည်
ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်တကယ်တော့သွားပြီး 'Brookes not books' 'ကိုတက်တူးထိုးတယ်
ဘွဲ့ရသည့်အခါ Rutgers နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သည့်အရာများလက်လွတ်မည်မဟုတ်၊
Bloomington အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော gluten free လမ်းညွှန်
Elon Musk နှင့်အညစျအကွေးများ၏ကလေးအမည်နှင့်ပတ်သက်သောဤ 27 မှတ်စုရိုးသားစွာလွန်းဖြစ်ကြသည်
Uber တစ်ခုချင်းစီသည် Toyota Prius ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်?